मंसिर १३, २०७८ २१:२१ मा प्रकाशित
पोखराकी रुकु बास्तोलाले २६ हप्तामै चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा जुम्ल्याहा शिशुको जन्मदियो । भेन्टिलेटर र एनआइसीयूमा गरी साढे २ महिना अस्पतालमा राखेपछि स्वस्थ शिशु लिएर रुकु र उहाँका पति किसन कोइराला मंसिर १२ गते घर जानुभएको छ।
६ महिनामै जन्मिएका जुम्ल्याहा छोराछोरी सकुसल घर लान पाउँदा किसन र रूकु दंग
यो केसको नेतृत्व डाक्टर जागेश्वर गौतमले गर्नुभएको थियो। २६ हप्तामा जन्मिएका शिशु बाँचेका अन्य उदाहरण भएपनि २६ हप्तामा जन्मिएका जुम्ल्याह शिशु बचाउन सफल भएको नेपालको पहिलो घटना भएको डा.जागेश्वर बताउनु हुन्छ ।
२६ हप्तामा जन्मिएका शिशुलाई बचाएर पठाइएका घटना एकातिर छन् । तर नेपालमा कानुनले नै २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । २६ हप्तामा जन्मिएका जुम्ल्याह शिशुलाई कसरी बचाइयो ? साथै २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुन किन गलत छ भन्ने विषयमा डा.गौतमको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेका छौँ ।
उहाँ पोखराबाट रिफर भएर आउँदा गर्भमा बच्चा खेल्ने पानीका फोकाहरु फुटेर पानी बग्न थालेको थियो । यसअघि २६ हप्तामा जन्मिएको शिशु बाँचेको केही घटना भएपनि २६ हप्तामा जुम्ल्याहा शिशु भएको केस अहिलेसम्म आएको थिएन ।
नेपालमै पहिलो घटना भएकाले हामीलाई पनि शिशुलाई बचाउन नसकिएला कि भन्ने शंका थियो । सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास पनि थियो।
२६ हप्ताको गर्भ भएकाले अपरेशन नगरौँ भन्ने निर्णय हामीले गर्‍यौँ । उहाँलाई बेथा फटाफट लाग्यो।
पहिलो शिशु नाभी बाहिर निक्लिएको अवस्थामा जन्मियो । नाभी बाहिर निस्किएको शिशु बच्ने सम्भावना थोरै मात्रै हुने भएकाले हामीले एक शिशुलाई जोगाउन सकेनौँ भन्ने लाग्यो।
त्यो शिशु जन्मदाँ मुटुको चाल मात्रै थियो । सासै फेरेको थिएन । हामीले बच्चाका डाक्टरहरुसँग पनि समन्वय गरिरहेका थियाँै । बच्चाका डाक्टरहरुले तुरुन्तै सक्सन दिएर सास फेराउनी ट्युब इन्क्यूभेटर हालेर सास फेर्न सहयोग गर्नुभो । त्यो शिशुले सास फेर्न थाल्यो र हामीले भेन्टिलेरटमा पठाइहाल्यौं । ५ मिनेटपछि अर्काे शिशु जन्मियो । दोस्रो शिशु भने चल्मलाइरहेको थियो । उसको त्यो अवस्थाले दोस्रो त ठिक छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भयौं।
केही दिन भेन्टिलेटर र त्यसपछि लामो समय एनआइसीयूमा राखेर हामीले दुवै शिशुलाई बचायौँ । यसलाई म मेडिकल क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धी भएको मान्छु । २६ हप्ताको बच्चा बाँच्दैन भनेर छाडेको भए बच्चाहरु त मर्ने थिए।
हाम्रो देशमा २८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी अधिकार दिइएको छ । २६ हप्तामै जन्मिएका त्यो पनि जुम्लाहा बच्चा यसरी बाँचेका छन् । २६ हप्ताका शिशु स्वस्थ भएर हुर्किरहेका केस अगाडि नै छन् । कति त ठूला भएर आफ्नो व्यवसाय, काम गरिरहेका छन् ।
हामी २८ हप्ता गर्भमा रहिसकेको बच्चालाई मार्ने कानुन बनाइरहेका छौँ । बच्चा मार्ने यस्तो अपराधी कानुनको म सुरुदेखि नै घोर विरोधी हुँ । २६ हप्तादेखिका धेरै शिशुलाई आफैँले बचाएको छु ।
२२ हप्ताको गर्भको शिशुलाई पनि बचाउन सक्ने अध्यनबाट देखाइसकेको छ । स्रोत साधन, प्रविधि भए २२ हप्ताको गर्भको शिशु बाँच्न सक्छन् । केही दिनअगाडि मात्रै अमेरिकामा २२ हप्ताको गर्भको शिशु बाँचिसक्यो । नेपालको सन्दर्भमा ३०, २९, २८, २७ हप्ता हुँदै २६ हप्ताको गर्भको शिशु बाँचेको हाम्रै सामू छन् ।
त्यसैले गर्भबाहिर निस्किएर बाँच्न सक्ने उमेर भएका शिशुको हत्या गर्न पाइँदैन।
त्यो विधेयक ड्राफ्ट गर्ने बेलामा म प्रसूतिगृहको निर्देशक थिएँ । विज्ञका रुपमा मलाई पनि बोलाइएको थियो । अरु डाक्टरहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले बढीमा २०–२२ हप्तासम्म मात्रै राख्न मिल्छ भनेका थियौँ । कसको सल्लाह अनुसार २८ हप्ता राखियो । थाहा छैन । २८ हप्तापछि गर्भएपतन गरेर जीवित शिशुलाई डाक्टरहरुले जानाजान कसरी मार्न सक्छन् ? म चाहिँ सक्दिन ।
गर्भपतन गर्न पाउने समय २०–२२ हप्ता भन्दा बढी राख्नै हुँदैन । यसलाई रोक्नुपर्छ यसतर्फ राज्यको ध्यान बेलैमा जान जरुरी छ।
कुनैपनि डाक्टरले गर्भमा हुर्किरहेको शिशुको हत्या गर्न सक्दैन । त्यसैले २२ हप्ता पछिको गर्भको शिशुलाई जोगाउन नयाँ पहलको जरुरी छ।